Umkhiqizi Ohamba phambili Wewindi Ofana Naye | AmaMede
Ubuciko obusha ukuhlangabezana nobuhle bakho ngabunye! Ukwenza ngezifiso nokwenza ngokwezifiso ukwehluka! Uma kuqhathaniswa neminye iminyango namawindi asebenzayo, uhlelo lwamawindi olufanayo lunaka kakhulu isipiliyoni sokuphila. Imibala emincane nokuklanywa kokuhlobisa okulingene kufinyelela emhubheni womklami weMEDO, ukwenza le minyango namawindi abe ngumuntu avelele kakhulu.
Parallel Iwindi System
Ngokuhlukile kwewindi elijwayelekile lokukhishwa kwewindi, ifreyimu ebunjiwe yodonga lwamakhethini yenza lula i umbono, Futhi lonke iphaneli lingaqhutshelwa ngaphandle ngomphumela wokuphakama okuqondile.
Imodi yokuvula engu-360 ° iyinika imisebenzi yokukhanyisa kahle, yokungenisa umoya kanye neyentuthu.
Uma kuqhathaniswa namanye amasistimu ewindows aphishekela umsebenzi wokuhlobisa, i-MD-95PT parallel Uhlelo lwewindi lunaka kakhulu isipiliyoni sokuphila.
Abaqambi beMEDO benze lo mklamo ngokweqile ngemibala eyenziwe lula futhi imigqa yokuhlobisa.
Iwindi elihambisanayo le-MDPXX95A
Ubuciko obusha ukuhlangabezana nobuhle bakho ngabunye! Ukwenza ngezifiso futhi ukwenza ngokwezifiso ukwehluka. Uma kuqhathaniswa neminye iminyango esebenzayo futhi windows, uhlelo lwamawindi olufanayo lunaka kakhulu abaphilayo isipiliyoni. Imibala emincane nokuklanywa kokuhlobisa okulingene kuze kube semhubeni womklami we-MEDO, ukwenza le minyango ibe ngabantu futhi amawindi avelele ngokwengeziwe.
I-Flat Push, Ukuvulwa Okukhulu
Iphrofayili yekhefu lokushisa ukufezekisa ukufudumeza okuhle kakhulu kokushisa. Iyafana kuvulwa ibhande lefasitela elifihliwe newindi lokuvula elikhulu.
Heavy Umthwalo Bearing
Umthwalo osindayo we-bcaring friction hinge wewindi elikhulu lokuvula.
Flush Uzimele Futhi Sash, High Ukubekwa uphawu
Uhlaka Flush futhi sash
Ukuqina komoya okuhle
Uhlaka lwe-Flush nebhande elinombono ococekile nemfashini. EPDM ama-gaskets ahlanganisiwe wokuqina komoya nokuqina kwamanzi.
Iphoyinti lokumelana nophahla nomgcini wokuphepha okwengeziwe nomoya ongcono ukumelana. Isilawuli kude se-Smart sokusebenza okulula.
KUSETIMISELWE | UBUNGAKANANI BODONGA
Ngokungafani newindi le-casement newindi le-awning, ibhande lewindi elihambisanayo likhishwa ngaphandle ngokuphelele. Lonke olungaphambili lwesakhiwo lubukeka lubumbene futhi luhlelekile noma ngabe wonke amawindi evulekile, futhi ukubonisa okungahambelani kungagwenywa.
Akunandaba ukuthi ukukhanya kwelanga kuqhamuka ngakuphi, kungangena ekamelweni ngaphandle kokuvinjelwa ingilazi.
Ukuvinjelwa okuvinjelwe kunikeza ukuphepha kubo bonke abasebenzisi ikakhulukazi ezindaweni zomphakathi ezinjengamahhotela, izibhedlela, amakolishi nezakhiwo zebhizinisi njll. Ukusebenza okulula, okusebenzayo kwefasitela ukulibeka endaweni evulekile enkulu kuqinisekisa ukuthi wonke umuntu angasebenza ngenkathi enikeza ukuphepha okuphezulu.
Ukupholisa okuhle kakhulu noHlelo Lokukhipha
Ukungenisa umoya okusebenzayo kuzungeze izinhlangothi ezine zefasitela. Umoya ungahamba kalula. Futhi intuthu ingaphuma ngokushesha. Ngenxa ye-SARS ne-COVID, umoya omncane uwazisa kakhulu umphakathi.